INew Gleen ligama iBlue Origin elibhaptize ngayo irokethi yayo enkulu | Iindaba zeGajethi
Kumdyarho wokuphuhlisa iirokethi ezinokuphinda zisebenze bekukho iinkampani ezimbini ezibonakala zikwincopho yazo, esithetha ngayo SpaceX y Blue Origin, eziwelise uthotho lweengxelo xa ziqonda ukuba amanqanaba aphunyezwe yiSpaceX abaluleke kakhulu kuba iirokethi zawo ziye zaqhubeka. Ngoku ukusuka kwiBlue Origin bafuna ukutshatisa ukhuphiswano ngokubonisa irokethi yabo entsha, abathi babhaptiza ngegama lika Entsha iGleen, ngozuko lukaJohn Gleen, usomajukujuku wokuqala waseMelika ukubhabha kumjikelezo woMhlaba.
Njengoko inkampani ivakalisile, iNew Gleen iya kuba njalo irokethi yakhe yokuqala ejikelezayo kwaye, enkosi koku, ifuna ukungena kwicandelo lemakethi elikhulayo njengeenkonzo zabucala. Ukuya kwinkcukacha ezithe kratya, njengoko ubona kumfanekiso obekwe phezulu kanye kule post, iNew Gleen iya kuba sisigebenga esinamandla okubonelela ngeenkonzo zokuthumela iisathelayithi kunye noosomajukujuku ukujikeleza komhlaba osezantsi, Umsebenzi okwangoku uhanjiswa ziinkampani ezinje nge-United Launch Alliace okanye i-SpaceX.
Imvelaphi eBlue ibonisa i-rocket yayo entsha
Ukubuyela kwakhona kwifoto ekhoyo ngaphezulu kwesi sithuba, ukuba siqwalasele, siya kufumanisa ukuba iNew Gleen inokuba nayo ukuya kuthi ga kwizigaba ezintathu eya kuthi ikuvumele ukuba wenze imisebenzi ehamba ngaphaya kwe-orbit ephantsi yoMhlaba. Kule nguqulelo yamanqanaba amathathu, irokethi iya kuba nobude be 95 mitha Ngelixa, kwinguqulelo yeqonga, ubungakanani bayo buya kuncitshiswa 82 mitha. Njengoko ubona, kuzo zombini ezi meko, ubungakanani buya kuba bukhulu kune-Delta IV Heavy ye-United Launch Alliance okanye i-Falcon Heavy ye-Space X.
Njengeenkcukacha, yonke into efundwe kwiNew Shepard iya kwenziwa kwinqanaba lokuqala lerokethi ukuze oku, iya kuphinda isebenze. Ngenxa yoku, iBlue Origin ngoku kufuneka ijongane nengxaki entsha kwaye iyakunyanzeleka ukuba irocket rockets ezifika zivela kwindawo ephezulu kakhulu kwaye ngesantya esiphezulu kakhulu kuneemvavanyo ezenziweyo ukuza kuthi ga ngoku apho iNew Shepard ibhabhele kuphela indawo.
IGlenn eNtsha iya kuxhotyiswa ngesixhenxe Iinjini BE-4, zisaphuhliswa, iinjini eziya kuthi zisebenzise amandla e-Vulcano rocket ye-United Launch Alliance. Iinjini ze-BE-4 ziya kuyinika amandla iGlenn eNtsha 3,85 yezigidi zeepawundi, oza kuyibeka emxholweni i-Falcon Heavy iya kuba namandla ezi-5 yezigidi zeepawundi ngelixa i-Delta IV Heavy ine-2 yezigidi zeepawundi.
Olunye ulwazi: iMvelaphi eBlue
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » INew Gleen ligama iBlue Origin ayibhaptize ngayo irocket enkulu
I-Zubi Flyer, iqonga elikhulu lokufunda ukwenza inkqubo